လူဦးရေ — Steemit
လူဦးရေအထူးအရပျ၌သားသက်ရှိများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဆိုလို။ လူ့လူဦးရေရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအဓိကအားဖြင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာအတွက်စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိဖြစ်လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူဦးရေနှုန်းကအရမ်းနိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိသောနေရာများရှိပါသည်။
လူဦးရေတိုးပွားလာ - အိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးကဗိုလ်မှူးပြဿနာ
အိန္ဒိယကြီးထွားလာလူဦးရေရဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 17% ကကမ်ဘာပျေါတှငျလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုအောင်အိန္ဒိယတွင်နေထိုင်သည်။ နီးပါးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူဦးရေအတွက်တိုးလာအထောက်အကူပြုကြောင်းအတော်ကြာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယတွင်လူဦးရေရဲ့ကြီးထွားမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာစာမတတ်ပါပဲ။ အဆိုပါပညာမတတ်သူနှင့်ဆင်းရဲသောလူတန်းစားကနေပြည်သူ့သားသမီးများ၏ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကိုဆောင်သောမြင်ကြသည်။ ဒီအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာထိုသူတို့အဘို့ကိုပိုကလေးများအလုပ်လုပ်နှင့်မိသားစုများအတွက်ငွေရှာဖို့လက်အားပိုအရေအတွက်ကိုဆိုလို။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ထဲကအများစုဟာမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ အစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုလညျးအမြိုးသားတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ရလဒ်များ။ လူဦးရေအတွက်တိုးတကျမှုကိုလည်းအနိမ့်သေဆုံးနှုန်းမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက်ကုသမှုနှင့်ကုသတီထွင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အရှင်သေဆုံးနှုန်းကဆင်းသွားပြီ။
အစိုးရက 21 နှစ်အဖြစ်လူတို့သညျအဘို့အနိမ့်ဆုံးထိအသက်အရွယ် set နဲ့ 18 နှစ်အဖြစ်မိန်းမတို့အဘို့သိရသည်။ သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့မတင်းကြပ်စစ်ဆေးမှုများလည်းမရှိ။ တိုင်းပြည်ကျေးလက်နှင့်နောက်ပြန်ဒေသများရှိလူများတုန်းပဲအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာသူတို့ကလေးတွေကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ အစိုးရကလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းတူညီအပေါ်တစ်ဦးတင်းကြပ်စစ်ဆေးမှုများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည်လည်းသားသမီးများ၏ကလေးမွေးစားခြင်းမြှင့်တင်နေပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များရှိနေသော်ငြားလည်းမွေးဖွားမှာသူတို့ကလေးတွေကိုစွန့်ခွာသူအတော်တော်များများလူတွေရှိပါတယ်။ ကလေးများချမှတ်ထက်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းလည်းလူဦးရေထိန်းချုပ်ဖို့ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။
ကြီးထွားလာသည့်လူဦးရေအိန္ဒိယအတွက်အလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့အချို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေပါပြီစဉ်တွင်တူဤအလုံအလောကျထိရောကျမှုမရှိကြပေ။ ဤပြဿနာကိုထိန်းချုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးများစွာသောအခြားအစီအမံရှိပါတယ်။
#good-karma #world #population #growth